Ogaden News Agency (ONA) – Shir Loogu Magacdaray Qorshe Halgan iyo Quus Gumaaysi oo soo Gabogaboobay
Shir Loogu Magacdaray Qorshe Halgan iyo Quus Gumaaysi oo soo Gabogaboobay
Waxaa maalinimadii sabtida lagu qabtay magaalada Toronto shir wayn oo loogu magacdaray Qorshe Halgan iyo Quus Gumaaysi. Shirkan waxaa soo abaabulay Jaaliyada reer Ogadenia ee Ontario. Waxaa shirka looga kala yimid magaalooyinka waawaayn ee gobolka Ontario. Martisharaftii kasoo qaaybgashay waxaay kakala yimaadeen magaalooyinka Toronto, Hamilton Kitchener, Windsor, London, Ottawa iyo manesotta USA
Shirka waxaa kaloo kasoo qaaybgalay dadwaayne badan oo kasoo jeeda Soomalida dagan magaalada Toronto. Waxaa laga jeediyay qudbado badan oo taabanaya qorshayaasha cusub ee jaaliyada reer Ogadenia ee Ontario eek u aadan horusocodka halganka gobanimadoonka ee shacbiga reer Ogaadeenya. Arinka dhamaan wufuudii shirk aka jeedisay qudbadaha aay kunuuxnuuxsadeen ayaa ahaayd sida qaati iyo quus uu ooga taaganyahay gumaaysiga madoobi xeeladaha halganka xornimadoonka ah ee reer Ogadenia.
Waxaa shirka qudbado badan oo kala duwan kasoo jeediyey gudoomiyaha jaaliyada Toronto maxamed qamaan(tube), gudoomiyaha jaaliyada Kitchiner Sheekh aadan faarax, gudoomiyaha kumeel gaarka ah ee Ururka Haweenka Ogaadeeniya Marwo Ruqiyo Noor iyo hawlwadeenada ururka dhalinyarada OYSU.
Waxaa shirkan goobjoog ka ahaa oo qudbad aad u qiiro badan kasoo jeediyay Maxamed Rashid, madaxa Abaabulka ee hogaanka (HAU). Waxaa dhinaca qadka kaga qaaygalay shirka Cadaani Hiirmooge, afhayeenka Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia (JWXO) iyo Gudoomiyaha JWXO Admiral Mohamed Cumar Cismaan. Shirkan oo biloowday xili hore laguna waday inuu gabogaboobo xiligii 10:00 fiidnimo aay ahaayd saacada Toronto ayaa waxaa lagu gaaray ilaa iyo saqdhexe si waqti loo siiyo wufuudii fara badnaayd ee kasoo qaaybgashay shirkan. Warbixinadeena dambe ayaan idiinku soo gudbin doonaa dhamaan qudbadihii laga jeediyay shirkan ooy oogu horaayso qudbadii Gudoomiya JWXO Admiral Mohamed Cumar Cisman.